Adrian Rawlins – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part2(2011) Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) သည် IMDb 7.7/10 Rotten Tomatoes 79% Roger Ebert ¾ Google users 96% ဒါရိုက်တာ David Yates ရိုက်ကူးထား၍ Steve Kloves, J.K. Rowling က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Family, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ဟယ်ရီဟာ အချိန်နဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးက Horcruxes ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြံတာကို တားဆီးကာ Deathly Hallows ဆိုတဲ့ မှော်လောကရဲ့ စွမ်းအားအရှိဆုံးအရာသုံးခုကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ...
IMDB: 8.1/10 681,981 votes
Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) သည် IMDb 7.7/10 Rotten Tomatoes 88% Metacritic 81% Google users 96% ဒါရိုက်တာ Mike Newell ရိုက်ကူးထား၍ Steve Kloves, J.K. Rowling တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Family, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… မှော်ဆရာငယ်လေးတစ်ယောက်သည့် ပြိုင်ဖက်မှော်ကျောင်းမှာ တကယ့်အန္တရာယ်များတဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးရဲ့ ခြောက်လှန့်မှုကိုလည်း ခံနေရရာ ဘယ်လို စွန့်စားခန်းတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…. Reviewed by Win Kyaw ...
IMDB: 7.7/10 481,392 votes
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) သည် IMDb 7.8/10 Metacritic 82% Rotten Tomatoes 91% Google users 96% ဒါရိုက်တာ Alfonso Cuarón ရိုက်ကူးထား၍ J.K. Rowling, Steve Kloves က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Family, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဟယ်ရီရဲ့ ဟာဝတ်ရောက်ပြီး သုံးနှစ်မြောက်မှာ အမှောင်ဝိဇ္ဇာကာကွယ်ရေး ဆရာအသစ်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ရုံသာမက လူသတ်ပြီး အကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်နေတဲ့ စီးရီးယပ်စ်ဘလက်၏ နောက်က လိုက်လံနေခြင်းကို ခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed ...
IMDB: 7.9/10 479,585 votes